सन्देश तुम्बापो लिम्बुको “डाँडामाथिको जुन भैयो...” गजल सार्वजनिक - Naya Online
सोमवार, जेष्ठ १०, २०७८ (May 24th, 2021 at 3:00pm ) ग्लामर न्युज
नडाहा सुनसरी, १० जेठ । कवि तथा गजलकार सन्देश तुम्बापो लिम्बुको “डाँडामाथिको जुन भैयो….” बोलको गजल (गीत) हालसालै सार्वजनिक भएको छ ।
गत आइतबार बेलुकी मिङ्जिफुङ प्रिजेन्टसको अफिसियल युट्युब च्यानलबाट सार्वजनिक गरिएको सो गीतमा लोकप्रिय गायक स्वरूपराज आचार्यको स्वर रहेको छ । यसैगरि सो गीतलाई गाउँमा बसेर लामो समयदेखी कविता तथा गजल लेखनमा साधना गरिरहेका सन्देश तुम्बापोले सिर्जना गरेका हुन् । यस्तै गीतमा सङ्गीत भने सङ्गीतकार डि. आर. अटुले भरेका छन् । यस्तै गीतको भिडियो संयोजन भने निर्देशक एवं क्यामेरा मेन राजेश किराती लिम्बुले गरेका छन् ।
गीतमा मानिसले भोग्नु परेको कठिनाई, तथा ग्रामीण जनजीवनको कथा व्यथालाई उतार्न खोजिएको छ । यस गीतमा राजु कार्कीको रहेको छ । गीतका गीतकार तुम्बापो मोरङको लेटाङमा बसेर निरन्तर सिर्जना गरिरहने गर्छन् । कविता तथा गजलहरू प्रशस्तै प्रकाशित भएका छन् । उनको “अतीतका शब्दहरू” गजल सङ्ग्रहसमेत प्रकाशन भैसकेको छ ।
आफ्नो गीतको बारेमा नयाँ अनलाइनसङ्गको कुराकानीमा तुम्बापोले यो आफ्नो सिर्जना श्रोतामाझ पस्किसकेको हुनाले सबैमा उचित सल्लाह सुझाव दिन आग्रह गरे । उनले यहाँहरूको सल्लाह सुझाव आगामी दिनको आफ्नो निम्ति सफलताको कडी रहेको समेत बताए ।